इलियानालाई आफ्नो शरीरको बनावट बारे यति धेरै प्रफुलित ! Arthadaily: Search for truth and fact.
प्रकाशित: २०७६-८-१७ गते
इलियानाले आफ्ना फ्यानलाई खानेकुरामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेकी छिन् । सामाजिक संजालमा हट तस्वीर शेयर गरेको बिषयमा इलियाना भन्छिन्–‘हरेक समय फिट देखिनु आफैमा सजिलो कुरा होइन । हरेक मानिसमा तपाइको लुक्सको बिषयमा एउटा न एउटा अनुमान हुन्छ । कोही मानिस स्क्रिनमा देखिन्छ भने उसले आफूलाई ग्ल्यामर तरिकाले प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।’इलियानाले आफू सधै फिट देखिन संभव नभएको समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।